Fampiroboroboana ny hafanana avo lenta amin'ny indostrialy ho an'ireo mpamatsy fanamainana zezika sy trano YiZheng
Fampiroboroboana ny hafanana avo lenta amin'ny indostrialy matetika ampiasaina amin'ny lafaoro fanamboarana lafaoro sy rivotra mahery setra. Izy io koa dia azo ampiasaina hitaterana rivotra mafana sy gazy tsy manimba, tsy mandeha ho azy, tsy mipoaka, tsy mikorontana ary tsy miraikitra. Ny fidiran'ny rivotra dia tafiditra ao amin'ny sisin'ny mpankafy, ary ny faritra mifanitsy amin'ny làlan'ny axial dia miolakolaka, mba hahafahan'ny entona miditra tsara ny impeller ary kely ny fatiantoka rivotra. Ny mpankafy volavolan-tsolika sy ny fantsom-pifandraisana dia ampifanarahana amin'ny fanamainana zezika.
Inona no ilana ny fananganana volavolan-dalàna indostrialy avo lenta?
•Angovo sy angovo: toby famokarana herinaratra, fambolena herinaratra, fitrandrahana solika biomassa, fitaovana fanarenana hafanana indostrialy.
•Famafazana metaly: rivotra mitsoka ny sinteria vovoka mineraly (milina sinter), famokarana jiro ao amin'ny lafaoro (lafaoro kokoa).
•Fanaterana entona sy fitaovana: fanaterana rivotra ankapobeny, fanaterana rivotra avo lenta, fandefasana entona mora entina, fanaterana entona manimba, entona mifangaro amin'ny fandefasana fahalotoana.
•Fanaterana vovoka arintany, Fitaovana / Vovoka / Fitaovana / Fitaovana fibre.
•Hafa: fanamafisam-peo sy fanamafisana ny fitaovana indostrialy, fanarenana entona fako indostrialy, famatsiana rivotra sy fanamainana ny tsipika famokarana sakafo sy zava-mahadomelina.
Endri-javatra momba ny fananganana indostrialy avo lenta amin'ny indostrialy
•Famoahana ny tsindry entona avo kokoa, ary manome ny habetsaky ny fikorianan'ny rivotra, feo ambany.
•Ny zoro blades dia mandalo famolavolana fanamafisana, mahatohitra fitafiana ambony, fiainana fanompoana lava kokoa.
•Afaka manitsy ny volan'ny mpankafy sy ny tsindry amin'ny alàlan'ny fanamainana rivotra. Azonao atao ihany koa ny manitsy ny tsindry ataon'ny mpankafy amin'ny alàlan'ny fanovana ny hafainganan'ny mpankafy amin'ny alàlan'ny motera miovaova matetika.
•Fahombiazana avo lenta sy fahaverezan'ny angovo rafitra mpankafy ambany.
•Fifandraisana mora azo amin'ny zotram-motera sy ny hazo famindrana, tsy mila mihenjana na manova ny fehikibo, mpanafoana asa lany ambany fikojakojana.
•Afaka manome fahafaham-po ireo fepetra fametrahana entana feno vovoka
•Ny fametrahana toerana fitahirizana trano ho an'ny sensor ho an'ny mari-pana sy ny hovitrovitra dia afaka mametraka mora foana ny fitaovana fanaraha-maso mpihazakazaka.
•Mifantina motera fitsitsiana angovo mpamokatra motera sinoa (na mpanjifa ilaina), kalitao azo antoka, fanjifana angovo ambany.
•Manamboatra endrika araka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
•Fandraisana an-tanana ny famokarana vy avo lenta, na vy tsy misy fangarony ary fitaovana metaly hafa arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
•Ireo singa tsy voatery hisafidianana.
Fampisehoana an-tsary momba ny hafanana avo lenta amin'ny indostrialy
Safidy fakan-tsarimihetsika avo lenta amin'ny indostrialy avo lenta
Hafainganana r / min
Fanerena tanteraka Pa
Mikoriana m3/ h
Mikoriana m3 / h
Teo aloha: Fatana rivotra mafana
Manaraka: Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza
Fampidirana Inona no ilana ny masinin-tsakafo fampifangaroana disk mitsangana? Ny milina fampifangaroana mpamono Vertical Disc dia antsoina koa hoe feeder disk. Ny seranana fandefasana dia azo fehezina malefaka ary ny habetsahan'ny famoahana dia azo ovaina arakaraka ny tinady famokarana. Ao amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra, ny Vertical Disc Mixin ...
Fampidirana Inona no ilana ilay Conveyor Belt Mobile Portable? Portable Mobile Belt Conveyor dia azo ampiasaina betsaka amin'ny indostria simika, arina, mine, departemanta elektrika, indostria maivana, voamaina, sampan-draharahan'ny fitaterana sns. Mety amin'ny fampitana fitaovana isan-karazany amin'ny granular na vovoka. Ny hakitroky betsaka indrindra dia tokony ho 0,5 ~ 2.5t / m3. It ...
Fampidirana Inona no masinina mpamokatra zezika zezika? 1. Ny masinina zezika Urea Crusher dia mampiasa ny fikolokoloana sy ny fanapahana ny elanelana misy eo anelanelan'ny roller sy ny takelaka lava. 2. Ny haben'ny fahazoan-dàlana dia mamaritra ny haavon'ny fanorotoroana materialy, ary ny hafainganam-pandehan'ny amponga sy ny savaivony dia azo ovaina. 3. Rehefa miditra amin'ny vatana ny urea dia ...